Bandhigidda iyo Dabaaldega Fanka Farshaxanka
The Xarunta Farshaxanka ee Walker waa falsafad loogu talagalay bandhigida hal-abuurka ee farshaxanka iyo ka qaybgalka firfircoon ee dhagaystayaasha. Diirada saarista muuqaalka, waxqabadka, farshaxanka warbaahinta ee wakhtigeena, Walker wuxuu qaadaa qaab caalami ah, maaddo badan, iyo habab kala duwan oo loo abuuro, soo bandhig, fasiraad, ururinta, iyo ilaalinta fanka. Barnaamijka Walker wuxuu baari doonaa su'aalaha nagu qaabeeya oo nagu dhiiri geliya shakhsi ahaan, dhaqamo, iyo bulshooyin.
Iyadoo qayb ka ah qorshaha barnaamijka farshaxanka ah ee lagu taageerayo mashruuca taageerada mashruucyada waaweyn, McKnight waa munaasabad aasaasi ah oo isku-dubarid ah Mn Artists, hannaanka dijitaalka ee loogu talagalay farshaxanada Minnesota iyo ururada dhammaan farsamooyinka. Laga bilaabo 2001, Mn Artists waxay guriga ku haysaa fanka, qorista, fursadaha, iyo wada sheekeysiga - online iyo ka baxsan - oo loogu talagalay, farshaxan-yahannada Dhexe ee ka shaqeeya edeb walba. Iyada oo ay tahay warbaahinno warbaahineed oo maxaliga ah ee saxafiyiinta farshaxanimada ayaa sanadihii la soo dhaafay dhidibada, Mn Artists 'ballan qaadka ah ee qoraalka farshaxanka deegaanka waa kheyraad qiimo leh. Website-ka dib-u-kicinta ee hadda ayaa hadda ku faantaa in ka badan 2,700 maqaallo ku lug leh mawduucyo kala duwan oo farshaxan iyo dhaqameed iyo ka jawaabista farshaxanka dhammaan farsamooyinka.
"Bixinta fursado loogu talagalay farshaxanada maxaliga ah si ay ula hadlaan oo u saameeyaan barnaamajka Walker wuxuu abuurayaa xiriir muhiim ah oo ka dhaxeeya Walker iyo Minnesota farshaxanka." -NISA MACKIE
Shaqaalaha Walker ayaa hadda ka shaqeeya taxane barnaamijka cusub ee Mn Artists ee Walker kaas oo siin doona farshaxanada Minnesota inay fursad u siiyaan martida munaasabada barnaamijka fiidkii oo baaraya arin ama fikrad ku lug leh xirfadahooda ama farshaxanka iyo dhaqanka Minnesota - Mn Artists Presents. Walker wuxuu marin doonaa afar barnaamijyadan sanadkiiba oo leh wicitaano codsiyada fududeynaya mnartists.org bogga soo gudbinta ee la sameeyay oo la bilaabay 2014. Waxaad arki kartaa wicitaankeenna ugu horeeya barnaamijka halkan. "Waxaan ku faraxsanahay in aan horay u sii wado barnaamijkan cusub ee barnaamijka macallinimada," ayuu yiri Nisa Mackie, Agaasimaha Walker iyo Curator Waxbarashada iyo Barnaamijyada Dadweynaha ee kormeera Mn Artists. "Bixinta fursado loogu talagalay farshaxanada maxaliga ah si ay ula hadlaan oo u saameeyaan barnaamajka Walker wuxuu abuurayaa xiriir muhiim ah oo ka dhaxeeya Walker iyo Minnesota farshaxanka."
Barnaamijka Mn Artists wuxuu u heellan yahay hagaajinta muuqaalka tayada iyo qaran ee farshaxanka gobolka, farshaxanka, iyo wadahadalka dhaqanka. Marka lagu daro maqaalado badan, bogga wuxuu soo bandhigayaa in ka badan 3,200 bog oo farshaxan ah, 380 ururo oo ururada, iyo ku dhowaad 44,000 oo shaqo oo farshaxan ah.
Xarunta "Walker Art" Centre waxay ka mid tahay shan goobood ee casriga / casriga ee casriga ah ee Maraykanka iyo, oo ay weheliso Jiifsiga Iskuulada Minneapolis, oo soo jiidata in ka badan 500,000 oo qof sanadkiiba.